Ubuhlobo phakathi komkhwenyana nomkhwekazi
O, la mahlaya mayelana noninazala ... Kungenzeka yini ukuba ubudlelwane obuvamile phakathi komkhwenyana nomkhwekazi - abantu ababili abasondelene nawe?
Kungani kungabikho amahlaya angenangqondo mayelana nomamazala wakho? Yebo, ngoba thina besifazane sihlakaniphile futhi sibona abantu abakude. Siyaqonda kahle ukuthi simane nje sidinga ukuhlala ngokuthula "nomama wethu wesibili" ukuze silondoloze ukuthula nokuzwana emndenini wethu, futhi ngenxa yalokhu singakwazi "ukuhamba emikhanda yethu" futhi sihlale singathuli ngisho noma kukhona okungahambisani nathi.
Futhi kuthiwani ngamadoda? Abaningi babo abazi ukuthi bangazivumelanisa kanjani nezimo. Ngokuvamile bahlala ngesimiso esithi "vumela umhlaba ugobe ngaphansi kwethu." Kungenxa yokuthi umama ongavamile angathanda ukushintsha ngenxa yensizwa ethile, ngisho nendoda yendodakazi yakhe. Ngaphezu kwalokho, omama abaningi babheka ukukhetha kwengane yabo hhayi ngokuphumelelayo kakhulu Yingakho kufanele siqinisekise ukuthi umkhethi wakho ufanelwe ukuhlanganyela nawe kokubili usizi nenjabulo.
Ngakho-ke akudingeki ukuba ubukele impi evelayo phakathi kwabantu obathandayo, kufanele wenze ngokufanayo ngesikhathi esisodwa: indoda nomama.
Ngaphambi kokuthatha noma yiziphi izinyathelo zokuletha umama wakho nomyeni wakho eduze, unqume ukuthi yini oyifunayo. Uma ulindele ukuvela kungazelelwe kwemizwelo yomndeni, cishe, cishe uzobhekana nokuhluleka okulimazayo. Yiqiniso, kunezimo lapho owesifazane onendodakazi yendodakazi naye ethola indodana enothando, kodwa namanje, lokhu kunalokho, okungafani nemithetho evamile.
Ungadingi uthando! Kwanele ukuthi wonke amaqembu "asayine isivumelwano sokungabi nangobudlova." Ukungathathi hlangothi komngane wakhe nomkhwekazi wakhe, ngokuyinhloko, kuyindlela enhle. Mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi umlingani wakho uzomuzwa wokuthi unomama wangempela wesibili, kodwa akakho Okungaphezu kwalokhu, ukuze ungaboni ukukhungatheka. Okwamanje, sizozama ukuwahlanganisa ndawonye.
Yakha ubuhlobo obuhle
Indlela engcono kakhulu yokunqoba impi phakathi komkhwenyana nomkhwekazi empini ukuwuvimbela kusukela ekuqaleni. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukwenza yonke imizamo yokwakha ubuhlobo obuhle phakathi komthandekayo wakho nomama wakho ekuqaleni kokuphila kwakho okushadile (ngokufanele - ngaphambi komshado). Ayikwazanga ukuyenza ngesikhathi? Ukuphuza kangcono kunanini ngaphambili.
"Sebenza" nomyeni wakhe
Ngokusekelwe kuma-anecdotes, amadoda amaningi akholelwa ukuthi umkhwekazi ophelele nguye ohlala amakhilomitha ayizinkulungwane ezivela kuwe futhi uvakashela izinsuku ezimbalwa kanye ngonyaka. Ngalolu khetho, kulula ukugcina ubuhlobo obufudumele. Nokho, empilweni yangempela ngokuvamile kwenzeka ngokuhlukile. Qala "ukwelashwa" kwabathembekile! Zama ukuletha kumyeni ukuthi ucabanga ukuthi kuzodingeka asebenze kanzima ukuze afinyelele isimo esihle kuye. "Akafuni ukuthi uphikisane nonina?" Ngakho awufuni.
Ngakho-ke, umkhwenyana kufanele azibonakalise ngesandla esingcono kakhulu, enze okuthile okumnandi kumamazala. Yiqiniso, uyazi kahle izinto ezithandwa ngumama wakho. Zama ukuvimbela izimo ezingaqondakali noma ngisho nokuhlekisa. Isibonelo, ungakhohlwa ukutshela umyeni wakho ukuthi umama wakho uyamzonda ama-daffodils, ngoba ngandlela-thile amhlobanisa ngamathuna. Noma umvimbele ekuthengeni ikhekhe elikhulu, uma wazi ukuthi umama wakho udla ngokuqinile, njll.
Uma umama wakho eqinisekile ukuthi "lo muntu akayena umlingani wakho futhi ufanelwe okungcono kakhulu," zama ukufakazela okuphambene nalokhu: wazi kahle kahle izinzuzo nokulimazeka komuntu wakho. Zama ukubheka njalo izici ezinhle kakhulu zomkhwenyana wakho, akunakusizo ukukwenza ngamazwi, kuphumelela kakhulu ukukwenza .
Isibonelo, okhethiweyo wakho owaziwa kahle kwezobuciko, akahle ekugcineni ingxoxo yezwe. Kodwa unezandla zegolide. Mtshele ukuthi umama wakho unompompi omude noma udinga ukubopha ishalofu endlini yokugezela.
Mhlawumbe, ngokuphambene nalokho, umyeni akazange abe nesando ekuphileni kwakhe. Kodwa yena, njengomama wakho, uthanda ukudweba futhi adonsa indawo yaseshashalazini. Kungani ungameme umkhwekazi wakhe embukisweni noma ukusebenza kahle? Ngikholelwa, uzomangala kakhulu.
Cishe uthanda umyeni wakho, kodwa ungamniki ngokuphelele isikhathi sakho samahhala. Ungakhohlwa ngokuxhumana nabazali! Cabanga, uma umama wakho ezwa sengathi ukhohliwe, khona-ke uzoba netyala lokungacabangi nawe, kodwa umuntu "ombele indodakazi yakhe" kuye.
Kwenzeka ukuthi umona kamama ukhulume kakhulu, njalo ulalele. Ngokuvamile lokhu kwenzeka kubafazi abangashadile abazinikezele ukuphila kwabo bonke abangane abangabodwa, kodwa manje bazizwa bengasebenzisi lutho kunoma ubani. Mhlawumbe ukuzalwa komzukulu noma umzukulu kuzokusiza ukubhekana nale nkinga. Kodwa, ngaphezu kwalokhu, ungazama ukuthola umama wakho ahlanganyele nento ethile. Futhi akazange yini ebophe isiphambano ebuntwaneni bakhe? Mnike iqoqo elihle lezintambo kanye nohlaka. Ukwazi? Cela ukubopha i-sweater. Futhi umkhwenyana wami othandekayo naye.
Ayikho imindeni lapho wonke umuntu ehlala ejabule ngaso sonke isikhathi. Ngezinye izikhathi kukhona okusikhathazayo. Futhi-ke, phakathi komkhwenyana nomamazala, izimo eziphikisanayo zivela futhi. Akudingekile ukuba nethemba lokuthi bangabantu abadala futhi bazoziqonda ngokwabo. Uma uvumela izinto zihambe ngokwazo, akukho okuhle okuzovela kuzo. Ngakho-ke, thina, abafazi namadodakazi ngomuntu oyedwa, kufanele sibonise izimangaliso zokubekezela, ukuhlakanipha nokuhlakanipha ukuze silondoloze ukuthula emndenini.
Ngisho noma ukuphikisana okuvulekile kwakugwemekile, lokho okubi akusekhona. Ngakho-ke, asiphumuli futhi ungakhohlwa ngemithetho ebaluleke kakhulu engeke iphulwe.
1. Ungabambeli obala. Kunoma ikuphi, omunye wabantu abathandekayo kuwe uzocasuka.
2. Ngisho nangasese, umuntu akufanele asekele ukungathembeki kakhudlwana komyeni mayelana noninazala futhi ngokufanayo. Esimweni esithakazelisayo, umuntu angasho okuthile ongakwazi ukukukhohlwa nokuthethelela isikhathi eside.
3. Uma uphinde ukhubeke, ungavumeli ukugxeka umyeni wakho phambi komama wakho futhi ngokuphambene nalokho. Uzokwamukela ukwehluleka kokubili komyeni nomama, kodwa akudingeki ukwazi imicabango yakho ngalokhu nhlobo!
Into ebaluleke kakhulu esiyikhumbula ngaso sonke isikhathi ngathi futhi sikhumbuze umama wethu nomyeni wethu othandekayo ukuthi akekho kithi ophelele futhi ngeke ashintshe. Kodwa uyabathanda kokubili ngenxa yazo zonke izinkinga zabo. Futhi okungenani ngenxa yalokhu kumele bahloniphe umbono womunye nomunye.
Zamukele thina ngendlela esiyiyo
Indlela yokunquma uhlobo lwesifazane ngehora
Indlela yokubhekana nobuvila, indlela yokuphumelela
Ukulungiselela ama-mask nezimonyo ezithombeni ekhaya
I-sauna, ibhuku, ukusikhipha eMoscow
Compote kusuka ezinsukwini
Ikhekhe le-air nge-cognac
I-triad yamafashini: izintambo ezisemqoka zenkathi ebandayo-2016